Guardiola oo ka hadlay xaalada xidigaha ka dhaawacan kooxdiisa kahor kulanka Hoffenheim ee Champions League – Gool FM
(Champ’ League) 11 Dis 2018. Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Manchester City ay heysato adeega 15 ciyaartooy ka mid ah xidigaheeda, kulanka ay Arbaca kula ciyaari doonto kooxda Hoffenheim ee tartanka Champions League.
David Silva ayaa laga yaabaa inuu maqnaado kulankaan sababo la xiriira dhaawac muruqa ah ee kasoo gaaray kulankii Chelsea.
Laacibka reer Spain ayaa ku biiray liiska dheer ee xidigaha dhaawacyada kala duwan kaga maqan Sky Blues ay ka mid yihiin Kevin De Bruyne, Danilo, Sergio Aguero, Benjamin Mendy iyo Claudio Bravo.
Guardiola ayaa sheegay in Sergio Aguero uu dib ugu soo laaban doono kooxda kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Everton Sabtida soo aadan, balse wuxuu sidoo tilmaamay in David Silva ay suuragal noqon karto inuu maqnaado dhowr isbuuc
“David Silva ma uusan awoodin inuu ciyaaro, Kevin De Bruyne ma ciyaari karo, Danilo wuu awoodi waayay, Aguero diyaar ma ahan”.
“David Silva waxaa laga saaray kulankii ugu dambeeyay ee Chelsea, ma ahan dhaawac halis ah, balse wuxuu maqnaan doonaa dhowr isbuuc”.
“Malaha Aguero wuxuu heystaa fursad uu ku soo laabto dhamaadka todobaadkan”
Sidee Liverpool ugu soo gudbi kartaa wareega 16-ka Champions League????....(XOG DHAMMEYSTIRAN)
“Waa fool xumo in la dhaho Modrić uma qalmo abaal marinta Ballon d'Or” _ Iniesta